I-Kaleidoscope: Inkqubo eyahlukileyo yeApple yeeFolders, iKhowudi kunye neMifanekiso | Martech Zone
Omnye wabathengi bethu ufuna ubeko olutsha lwephepha labo lasekhaya elifuna ukukhula kancinci kuwo onke amaphepha omxholo. Ngelixa sasilungile malunga nokuphawula ikhowudi, khange sibeke uxwebhu olupheleleyo kuzo zonke iifayile ezintsha ezihlaziyiweyo esizenzileyo kwaye besingajongani notshintsho ngalunye kwindawo yokugcina izinto (abanye abathengi abayifuni loo nto). Emva kwenyani, akukho mnandi ukubuyela umva kwaye uphicothe iifolda kunye neefayile, ndiye ndakhangela isisombululo ndaza ndasifumana- Kaleidoscope.
Nge Kaleidoscope, ndakwazi ukwalatha kwifolda nganye kwaye kwangoko ndachonga ukuba zeziphi iifayile ezongeziweyo, ezisusiweyo, okanye ezahlukileyo kwenye.
Ndaye ndakwazi ukuvula nganye yeefayile ezihleliweyo kwaye ndabona icala-ngecala lokuthelekisa ikhowudi egqityiweyo. Nanku umzekelo ngeefayile zombhalo ezicacileyo:
Ukuba oko bekungapholanga ngokwaneleyo, iKaleidoscope inokukufeza ukuthelekisa okufanayo nemifanekiso!
Emva kokukhuphela, bendiphakame kwaye ndisebenza kwimizuzwana embalwa-ujongano lomsebenzisi lwalunomdla kwaye kulula ukuluqonda.
Khuphela uvavanyo lweentsuku ezili-14 lweKaleidoscope
tags: apileukuthelekisa ikhowudiapp yokuthelekisahlukileusetyenziso olwahlukileyouthelekiso lwefayileuthelekiso lwefoldaifolda eyahlukileyouthelekiso lomfanekisoumfanekiso owahlukileyoiOSOSX